Art uye decolonization - Afrikhepri Fondation
Mugovera, june 12, 2021
kugashira PSYCHART Therapy
Inosangana nemakomba - Zirignon Grobli
Art uye decolonization
Kuverenga: 6 mins
Lanoshuvira kunzwa "zvakanaka nezvangu" uye kufara kurarama ndicho chinangwa chakatungamira pamusoro pekupinda kwangu mukuongorora. Iyi nyika, ndaive ndoiziva munyika yangu, Ivory Coast, iyo yandakasiya ndiine makore gumi nematatu, kuti ndirambe ndichidzidza muFrance. Ini ndakanga ndarasikirwa nayo, iyi mamiriro ehupenyu, mushure memakore matatu ekugara kure nemhuri yangu uye ndaida kuiwana zvakare chero zvodii.
Mushure menguva yakareba yekudzungaira uye kwekutsvaga kutsvaga mhinduro navanachiremba, psychoanalysis, yakawanikwa mukirasi yeuzivi uye kuyunivhesiti, yakazvimanikidza pandiri.
Yakanga iri nguva inofadza kuva paDheta Faladé mubhedha, anofara kutaura pasina kusununguka nezvematambudziko angu kune amai vakatsiva vakateerera zvakanyatsonaka uye zvakajeka.
Ini ndinofanira kutaura kuti ruzivo rwangu pamwe neye analytic kurapwa kwaigutsa. Uye pakupera kwekuongorora kwangu, ini ndanga ndichishanda nemazvo zvakakwana kuti ndione kuti ndakanga ndawana chinangwa changu.
Chimwe chinhu, zvakadaro, chakaramba chichindinetsa. Agoraphobia iyo yaionekazve nguva nenguva munguva dzekuneta uye iyo yandakanzwa sekukuvara kwehunhu hwangu. Zvaitaridza kwandiri kuti iyi phobia chimwe chinhu chakapunyuka kubata kwekutaura uye kufunga. Chimwe chinhu chinotyisa chandaifungidzira sehuremu hwemarara anorarama, tambo yezvishuwo zvekare, tarantula nhema pakati pehupenyu hwangu, iyo yakazoita hutsinye zvakanyanya pandakanga ndiri ndega nayo, munzvimbo yakavhurika.
Kwete kuva mumwe weavo "vanowirirana" nehurwere hwavo, ndakaedza kutsvaga nzira yekubvisa chikara ichi chakandikomba kubva mukati. Intuition yangu yakandiudza kuti mumamiriro ezvinhu aya apo ehunyanzvi hwekutaura hwaive husina simba, chiitiko chepamberi chaive chiratidzo chekurapa chekutevera. Ichokwadi kuti panguva ino yekuongorora kwangu, kutaura kwaiita senge hakuna maturo, zvisina kukodzera senzira yekutaura pamberi pechinodikanwa chekuita uye kuburitsa zvishuwo zverufu zvakakandirana mukati memuviri wangu.
Kuvhurika kwangu mutsika dzeNegro-Africa, pamwe nekufungidzira kwekugadzika kwangu pa "anal stage" yebudiriro yakaonekwa naFreud zvirokwazvo kwakandibatsira musarudzo yangu yeArt senzira ine rukudzo yekuzvisunungura phobia yangu.
Kana isu tichifunga hunyanzvi hwechinyakare hunyanzvi hwemuAfrica, tinoona kuti hunyanzvi hwekugadzira yaive nzira yakarongeka yekuratidzira kweNegro-Africa. Chokwadi, icho chinhu cheArt hachisi, chemuAfrica muimbi, mumiriri wepurasitiki anoitirwa kufadza maziso kana kukanganisa pfungwa. Sezvatakambotaura, iri ideogram. Mune mamwe mazwi, iyo kongiri rutsigiro rwepfungwa iyo inokonzeresa kubva -kutanga-kwekutaura kugona kwekuchiva, kana kunyange kufa kutyaira.
Kubva pane yangu nhaka yetsika, nekudaro, ndakave nekugutsikana ndoga kuti hunyanzvi hwekugadzira hwaive hwakakodzera zvirinani kuti ndibvise kutya kwangu pane kunyepedzera-kwekutaura kugona kuburikidza nekunyora. Handina chokwadi chekuti nzira yekupedzisira iyi, inowanzo shandiswa kuMadokero senzira "yekupfuura" kurapwa kwekuongorora kuburikidza nehunyanzvi hwekunyora, yaishanda.
Zvakare, ko dzidziso yaFreudian haigadzirise hunyanzvi se "anal" sechinodiwa kubumbiro remusoro wenyaya uye kuti apinde mumunda wekufananidzira?
Zvakare, kuti ndipinde mukurwira kunosunungura chikara chakandigara uye chakandiparadzanisa, ndakaunza pamwechete zviridzwa zvakakodzera kuratidzwa kweshungu dzangu manzwiro: mapanga, mucheki, sando, matombo, machira, mamvemve, majeti e mvura, pakupedzisira zvese zvishandiso izvo fungidziro inoshusha inogona kupa.
Mukuda kupenda pane canvas, iyo isina kukodzera kugadzirwa kwepamoyo, ini ndinoshandisa pastels uye chaki pamakara ekutanga. Rutsigiro urwu, rwakasiyana nechando, runokweretesa kurwisa nekugadzirisa, matanda aya ane mavara andinogona kubata zvakananga uye nekuziva nezvishuwo zvandinoedza kubuda nazvo, fungidziro yeiyi pakadhibhodhi, ndibvumire yatokwana kundidzikisira.
Shungu dzangu dzinosuwisa dziri padanho repamusoro apo ini ndinounza mapanga (akapinza uye akaona), anocheka, sando yekupwanya makoko ane mavara, hurungudo uye kuti ndinogona kuashandisa kutsvaira makadhibhokisi ane varnished, kuakwenya, ku kukwiza, kubvarura, kubvarura zvidimbu, kuinyudza uye kuzviisa kumajeti emvura kuitira kuti mucherechedze nematanho eangu akasunungurwa sadism, semuvezi mutema muhuni.
Mune aya chaiwo mamiriro ekugadzirwa, iyo yekudyira svikiro, isina chinhu kadhibhodhi, inotora pane zvinorehwa nenzvimbo yekufungidzira fungidziro-kubuda kweanotyaira madhiraivhi anoonekwa nemifananidzo yekufananidzira. Uye basa rehunyanzvi rinova fananidzo yekupokana naamai vechirume.
Iyo imago yaamai vemurume, iyo inodzivirira kupinda kune baba baba uye inorambidza kupinda mumunda wekufananidzira, iri kwese kwese mutema Africa.
Anotyisa, anodya, asingagone, muFrench ethnologist Denise Paulme akapa bhuku rinoyemurika kwaari "amai vanodya" maari anomutsa nenzira yekufungidzira mutambo wemurume mutema akapararira mudhiabhori mweya wekukonana nemufananidzo. yemadzimai emurume = neimwe nzira mumwe wevatsigiri anopinza mumwe nekumuburitsa, mune gakava risingagumi.
Iyi hondo isingaone uye isina tariro yeNegro-Africa, mukutsvaga kwedu kununura, isu takaedza kuibata zvakare kubva kune zvakaitika kare. Uye zvakaratidzika kwatiri kuti, zvichiteedzana kusvika pakuvhunduka uye kushungurudzika kwekoloni kwakakanganisa zvimiro zvechinyakare zvekufananidzira, zvaive chiratidzo chekoloni mamiriro anozivikanwa nehukama hwehutongi husina kukamurwa.
Ichi ndicho chikonzero zvinoita sezviri pamutemo kwatiri kuona mune imago yaamai vechirume vanotonga zvine chisimba mukati meyaimbova colonized, chimiro che "mad master" akaisirwa mukati.
Amai vechirume uye murume wechirume, baba vane simba rese, ndivo chete zvigadzirwa zvinotyisa zvehutsinye nekuparadza kupindira kwesimba rekoloni.
Saka hatifanirwe kushamiswa nemweya wekutsamira uye nekushomeka kwakaomarara kwevakakomberedzwa, kunyangwe mushure me "kusunungurwa" kwavo. Nekuti chimiro chemukati tenzi, chinotapurirana kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa, kuburikidza nedzidzo, chinoramba chichienderera mukati mavo basa rayo rekoloni nekusimbisa. Izvo zvikonzero zvekupokana kweschizo-paranoid hunhu hunoshora aimbove mukoloni kwaari uye kune vamwe zvinowanikwa mukushungurudzika uku.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, zviri mune zvekufungidzira uye zvehutachiona nzira iyo hukama hwepant-passive hweNegro neColonizer hunosimbiswa.
Ichi ndicho chikonzero mubvunzo wekurwira rusununguko rwevakakoniwa uchifanira kubva zvino uchibvunzwa maererano nehurongwa hwepfungwa-hwehutachiona hunosanganisa zvakanakira chinyakare psychoanalysis neicho chiitiko chehunyanzvi chinogadzira mutauro uye chinotsigira kuziva kwemurwere. .
Kutenda neiyi nzira yekurapa inodaidzira psychoanalysis uye basa rehunyanzvi kugadzira mafomu akakosha anotsigira kusagadzikana kwemurwere, unenge uri mubvunzo wekusimbisa kubatana kweiyo ego nekubatanidza zita rababa. , uye kuwedzera miganho yayo kuburikidza nechisiko chinopa kudada kwenzvimbo yekuparadza-jouissance, kuitira kusimudzira kubuda kwechishuwo chekugadzirisa.
Basa rehunyanzvi rinobva rava mugumisiro wekuumbwa kwe "zvisaririra" nezita-ra-baba. Iyo "yakanaka yasara", yekufananidzira mumiriri wezita-ra-baba. Ichidudzirwa saizvozvo uye inoiswa mukati, aya mitauro-mafomu anodanwa kuti agadzire mhirizhonga yemukati yemurwere uye kuti ashandise fungidziro yake sechinhu mundima yekufananidzira.
Zirignon GROBLI, Art Therapist
Tenga € 20,00
Tenga € 9,99
Art Therapy uye Kugadzirisa Kurwisana
3 nyowani kubva ku € 15,90
2 yakashandiswa kubva ku22,56 €
Tenga € 15,90
Kusunungurwa (T2) kweMweya Wakatorwa kubva kuMatambudziko (la) Ph
5 nyowani kubva ku € 25,00
8 yakashandiswa kubva ku11,40 €
Tenga € 25,00
3 nyowani kubva ku € 1,50
Tenga € 18,92
Mugari wevashanyi: Baoulé uye iyo inosvibisa uye yekutamba yekutamba
2 yakashandiswa kubva ku37,00 €
Tenga € 22,90
Yakapedzisira kugadziridzwa muna June 12, 2021 5:14
Ndona Kimpa Vita: Amai veKongo kuramba kwemweya
Tarisa Kwira kumusoro, iyo ngano yemweya god baba: James Brown (2014)
William Kamkwamba anovaka turbine yemhepo kubva kuzvinhu zvakare zvakare
Tarisa Pacific Rim: Kumutsa (2018)
Nzira yekurapa sei nesimba rematombo?